खाली पेटमा सेतो चिया पिउनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् ! पेटमा बढाउँदछ ग्याष्ट्रिक म्यूकोसा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/खाली पेटमा सेतो चिया पिउनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् ! पेटमा बढाउँदछ ग्याष्ट्रिक म्यूकोसा
काठमाडौँ । अधिंकाश मानिसहरु आफ्नो दैनिकी चियाको चुस्कीबाट शुरु गर्छन् । प्राय जसो मानिस बिहान उठी मुख धोई खाली पेटमा नै चिया पिउने गर्दछन् । अझ् कति व्यक्तिहरु बिहान् मुख पनी नधोई चिया पिएर आफ्नो दिनको शूरुवात गर्दछन् ।